पानीजहाज सम्झाउने गरी काठमाडौंका ठाउँठाउँ डुबानमा ! ओली सरकार मुकदर्शक::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
पानीजहाज सम्झाउने गरी काठमाडौंका ठाउँठाउँ डुबानमा ! ओली सरकार मुकदर्शक
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : सोमवार, साउन २१, २०७५
काठमाडौं – लगातारको वर्षापछि विभिन्न क्षेत्र डुबानमा गर्दा एकातिर सर्वसाधारणलाई आपत गर्छ भने अर्काेतिर पटक–पटक राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने पानीजहाजको सम्झना गराउँछ ।
गएरातिदेखि परेको अविरल वर्षाले अहिले काठमाडौं लगायत विभिन्न क्षेत्रका सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । अबिरल वर्षाका कारण काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन् ।
शान्तिनगर, बानेश्वर, बल्खु, टेकुका सुकुम्बासी बस्ती डुबानले बढी प्रभावित भएका छन् । शान्तिनगरका १५–२० घर डुबानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ । सो क्षेत्रमा विपत् व्यवस्थापनको टोली परिचालन गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार बल्खुको सुकुम्बारी बस्तीमा २–३ घर डुबेका र ५–६ घर जोखिममा परेका छन् । ललितपुरको सैंबु भैंसेपाटीस्थित बिगमार्ट सपिङ सेन्टरमा पनि पानी पसेको छ । स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा सपिङ सेन्टरका सामानहरु सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीले जानकारी दिए ।
ललितपुरको गोदावरी खोला किनारका केही क्षेत्र पनि डुबानको खतरा रहेकाले सतर्कता अपनाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीका अनुसार ललितपुरकै लाँकुरी भञ्ज्याङ, भट्टेडाँडालगायत क्षेत्रका सडकमा पहिरो झरेर बाटो अवरुद्ध छ ।
मौसम विज्ञान बिभाग अन्तर्गतको बाढी सूचना केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार बाग्मती–खोकना बाढी केन्द्रमा पानीको बहाव सतर्कता तह नजिक छ र यो बढ्दो क्रममा छ । त्यसैले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका होचा भूभाग डुबानमा पर्न सक्ने भएकाले सतर्क रहन केन्द्रले अपिल गरेको छ ।
यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाका नख्खु, मनोहरा, बागमती, धोवीखोला, विष्णुमती लगायतमा पनि पानीको बहाव बढ्दो क्रममा छ ।